Pa onendawo iimpawu zemimandla (umahluko nkqubo ishishini le yasezidolophini neyasemaphandleni)
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Pa onendawo iimpawu zemimandla (umahluko nkqubo ishishini le yasezidolophini neyasemaphandleni)
Ekubeni elibe pa kwakhona yinkampani yorhwebo, hayi iivenkile oyinyaniso nje iphumelele abathengi. Ngoko ke, ezinye amashishini ngokunjalo, siya zisebenza kunye nomgaqo-nkqubo ngamnye ivenkile ukuthengisa. Kukho kwakhona inxalenye kuxhomekeke ukuba ratio imali kunye ezifana, kodwa iimpawu mmandla ingabonwa kakhulu kumgaqo-nkqubo zoshishino.
Kuthekani ukuba umahluko phakathi, masenze kuthelekiswa umahluko kweshishini kwiivenkile ezidolophini ezinkulu nakwezithengisa izinto zasekuhlaleni.
kwi abathengi ezidolophini nasemaphandleni, reference ezahlukeneyo ukukhetha elibe pa. abathengi Urban, kodwa uya kuza, elibe fans ukuze sijolise ukuphumelela, siya ukuza kwisitora ngenjongo yokudlala kunokuba aphumelele abathengi zasekuhlaleni. umahluko omkhulu kuya kuphuma amanye ukusuka apho. kwimisebenzi eyenziwayo iquka, kodwa kukho ezahlukeneyo umoya ukwenza ezifana nesevisi yabathengi kunye ivenkile, kukho rhoqo ethile ukuvelisa rhoqo kunye Ibhola enkulu njengoko umahluko phakathi replacement Xintai. In
nesendlu pa, ukwenzela ukunyusa ingeniso yokusebenza kunokuthiwa imisebenzi ufunwayo yokusebenza. Urban iivenkile replacement Xintai ngokuqhelekileyo eyenziwa. Nokuba kwiijenali zobungcali ezifana ngoku, nje ziyalungiswa apha naphaya inkcazelo Xintai kubonakala, abathengi ezidolophini wena ufuna ukuba ukubetha itafile yakutshanje. Ezikhuphisanayo shop malunga
kukuthi, seziqalile kwinqanaba zakutshanje kusekwangoko, ukutsala abathengi kwevenkile yakhe ngeke Yebo ukuwa. Agents akaveli ongenalo ishishini. Khon 'ukuze imeko enjalo, i adopter yokuqala kweqonga zamva ukukhuphisana, oko kuthetha ukuba ikhokelela ukutsala abathengi.
Noko ke, ukwazisa oomatshini abatsha baya kuthatha ngendleko enkulu. Kakade ke, ixabiso kufuneka kwakhona kuvuswa wachacha ingeniso. Ukulungiselela le njongo, kwisixeko ivenkile ongenakucimeka ngaphandle ibhola lonke ixesha lomsitho, sibeka ibhola kuphela ixesha Isisombululo intswelo iziganeko ezinzulu.
umzi pa parlour kukuba zokutsala abathengi, ukuvulwa eninzi kweziganeko, kukho kwakhona ivenkile ukwenza nesicelo apho evenkileni. Soloko kunzima ukubonisa intlawulo ethile, iimpawu umzi pa parlour komgaqo-nkqubo zoshishino inkulu kune okanye isibheno i Xintai, abaninzi eze kunye neziganeko kulindeleke ukutsala abathengi, oko kwizinto ezinjalo lokubhena. Xa evenkileni koko, Xintai nokutshintsha izihlandlo ezimbalwa ngenyanga. Rare ukuthetha replacement kunye
, kodwa kukho kwakhona koteka ku fambisa iqonga yakutshanje, abaninzi baya kuba ukuqaliswa itafile esetyenzisiweyo. ukuma elisetyenzisiwe kuthelekiswa nenqwelo yakutshanje, mna iindleko kuncitshiswe. Ngenxa yesi sizathu, kuphela siganeko, kuya kuba lula ukunika imali ezinzileyo ukusuka eziqhelekileyo.
kwakhona ukusuka kwisiseko somthengi, evenkile ukuba isibheno ukuba bokudlala ibhola, zerenti ephantsi kakhulu, gxila ngoxa baxhamli ezisezantsi-ukubuyela kwakhona kubethelela ahlala adlala ngayo kwizinto encinane. Kakade ke, lo ivenkile kodwa inzuzo ngaphantsi imini enye ngendlela efanayo, kuya kuba intsebenziswano ezinzileyo inzuzo njengoko zinokudityaniswa.
ukuze zizinze ukuvelisa inzuzo, xa kuthelekiswa igcina ezidolophini xa kuthe, ukuze kubanjwa iziganeko Gase ukuba umngcatsha abathengi babeza kuba mbalwa.
e nesendlu pa, ngoko kuya kuba ngendlela ezahlukeneyo yentengiso, kodwa hayi zonke pa parlour kuyinyaniso, ngale ndlela evela umahluko iimeko indawo nabathengi ze zomaleko, isixeko, nesendlu pa kunye pa parlour lendawo kwaye ukuba kukho umgaqo-nkqubo ezisisiseko ishishini eyahlukileyo.
Khumbula ukuba ebekuthethile oku kubo, kusenokuba kwaye babone uhlobo lweshishini Pachinkoya, intlawulo, iziganeko, njl, phawula ukuba ivenkile lizwi ndandicinga de ngoku a iivenkile Akumangalisi elihle it. x000D_ likriwa nenzuzo, nkqu isiganeko kuthelekiswa isixeko evenkileni, ukuba kubanjwa iziganeko Gase ukuba umngcatsha abathengi babeza kuba mbalwa.
Khumbula ukuba ebekuthethile oku kubo, kusenokuba kwaye babone uhlobo lweshishini Pachinkoya, intlawulo, iziganeko, njl, phawula ukuba ivenkile lizwi ndandicinga de ngoku a iivenkile Akumangalisi elihle it.